OTU ESI EMEPỤTA DISKI NKE ỌMA NA MMANYA MMANYA 120% - ESI MEE - 2019
Otu esi emepụta diski nke ọma na mmanya mmanya 120%
Site na ndabara, n'oge ntinye nke nkesa Linux, ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa iji rụọ ọrụ na-ejikọta OS a na-ebugo ma tinye ya na akpaghị aka. Otú ọ dị, nke a abụghị mgbe niile ọhụụ kachasị ọhụrụ, ma ọ bụ onye ọrụ ga-eji aka wụnye ihe ndị na-efu n'ihi ihe ụfọdụ. Nke a na-emetụta ngwanrọ maka ndozi ntanetị si NVIDIA.
Ịwụnye NVIDIA Graphics Drivers maka Linux
Taa, anyị na-enye anyị nyochaa usoro ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala na ihe atụ nke Ubuntu. Na nkesa ndị ọzọ na-ewu ewu, usoro a ga-eme nke ọma, ma ọ bụrụ na ihe adịghị arụ ọrụ, chọpụta nkọwa nke koodu njehie na akwụkwọ akwụkwọ ma dozie nsogbu ahụ site na iji ụzọ dị. Naanị chọpụta na usoro ndị a adịghị adabara Linux, nke dị na igwe arụmọrụ, n'ihi na ọ na-eji ọkwọ ụgbọala VMware.
Hụkwa: Ịwụnye Linux na VirtualBox
Tupu ịmalite nwụnye, ị ga-ekpebi ihe nlereanya nke kaadị vidiyo arụnyere na kọmputa gị, ma ọ bụrụ na ịnweghị ozi a, wee mepụta usoro ịchọọ maka nsụgharị software kachasị ọhụrụ. Enwere ike ime nke a site na njikwa console.
Mepee menu ma malite ngwa. "Njedebe".
Tinye iwu iji melite njirimara nchọpụta diagnostic.sudo update-pciids.
Nyochaa akaụntụ gị site na itinye paswọọdụ.
Mgbe mmelite zuru ezu, banyelspci | grep -E "VGA | 3D".
Ị ga-ahụ ozi gbasara ndị na-ese ihe nkiri. N'okwu gị, enwere eriri nwere, dịka ọmụmaatụ, GeForce 1050 Ti.
Ugbu a, jiri ihe nchọgharị ọ bụla dị mfe ma gaa na NVIDIA peeji nke iji mara ọkwọ ụgbọala ọhụrụ. Dejupụta ụdị kwesịrị ekwesị, ịkọ ihe nlereanya gị, wee pịa "Chọọ".
Lezienụ anya na nọmba na-abụghị ihe ederede "Version".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịnwere ike ịga n'ihu usoro maka imelite ma ọ bụ wụnye ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị. Ejiri ụzọ abụọ dị iche iche rụọ ọrụ ahụ.
Usoro 1: Ụlọ ndozi
Ọtụtụ mgbe, ngwanrọ dị mkpa dị na ndị ọrụ gọọmenti ma ọ bụ onye ọrụ repositories (repositories). O zuuru ka onye ọrụ ahụ budata faịlụ dị mkpa site n'ebe ahụ wee wụnye ha na kọmputa ya. Otú ọ dị, data ndị dị na isi mmalite dị iche iche nwere ike ịdị iche na mkpa, ya mere ka anyị lelee nhọrọ abụọ n'aka.
Ụlọ ọrụ nchịkọta ndị ọrụ na-echekwa ya site na ndị mmepe ngwanrọ na ihe ndị ọzọ. N'ọnọdụ gị, ịkwesịrị ịtụrụ aka nchekwa ụlọ ọrụ ọkọlọtọ:
Na ụdị ọnụahịangwaọrụ ubuntu-drivers.
N'okpuru dị iche iche ị nwere ike ịchọta ụdị nke ọkwọ ụgbọala ahụ a chọrọ maka ntinye.
Ọ bụrụ na mbipute a dabara gị, wụnye yasudo ubuntu-drivers autoinstalliji gbakwunye ihe niile ahụ, mahado apt wụnye nvidia-driver-xxxnaanị maka ndịna ọkwọ ụgbọala ebe xxx - ihe a chọrọ.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ kachasị ọhụrụ adịghị na ebe nchekwa a, ọ na-anọgide na-eji otu omenala iji tinye faịlụ achọrọ na usoro.
Onye ntinye aka
A na-emelite ọtụtụ faịlụ ugboro ugboro na ntinye akwụkwọ ndị ọrụ, na-emekarị ka ọsị ọhụrụ na-apụta na mbụ. Iji nchekwa dị otú ahụ nwere ike ịbụ ndị a:
Debanye aha na ọnụsudo add-apt-repository ppa: graphics-drivers / ppawee pịa Tinye.
Kwenye nbudata site na isi mmalite.
Mgbe imelite nchịkọta ahụ, ọ na-anọgide na-eme ka iwu ahụ mara.ngwaọrụ ubuntu-drivers.
Ugbu a, tinye akarahado apt wụnye nvidia-driver-xxxebe xxx - ụdị ọkwọ ụgbọala ị chọrọ.
Nabata mgbakwunye nke faịlụ site na ịhọrọ nhọrọ ziri ezi.
Chere ka ogwe oghere ga-apụta.
Na Mint Linux, ị nwere ike iji iwu si Ubuntu, ebe ha zuru oke. Na Debian, a na-agbakwunye onye ọkwọ ụgbọala ọwanyochaa ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ. Ndị ọrụ OS ndị ọzọ ga-ede akwụkwọ ndị na-esonụ:
sudo apt-nweta nweta nkwalite
sudo apt wụnye software-Njirimara-nkịtị
sudo apt-nweta nvidia-xxx.
Na nkesa ndị ọzọ na-adịghị ewu ewu, omume nwere ike ịdị iche dị iche iche n'ihi aha ndị ntinye nchekwa na ihe dị iche na iwu ndị ahụ, ya mere, dịka anyị kwuru n'elu, jiri nlezianya gụọ akwụkwọ ndị ahụ sitere na ndị mmepe.
Usoro 2: Usoro ihe ngosi
Ọ ga-abụ ihe dị mma karịa ndị ọrụ ndị ahụ na-ejighị nlezianya na ijikwa console ejiri ya iji ngwaọrụ GUI iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa. A na-eme usoro a n'ụzọ abụọ.
Mmemme na mmelite
Nke mbụ, ọ dị mma ịdebe ngwa ngwa "Mmemme na mmelite". Site na ya, agbakwunyere ngwanrọ nke dị na nchịkọta ụlọ ọrụ, a na-eme nke a:
Mepee menu ma chọọ ya. "Mmemme na mmelite".
Pịa taabụ "Ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ".
N'ebe a, chọpụta na kaa akara nke ngwanrọ nke NVIDIA, jiri ya akara ma họrọ "Tinye Mgbanwe".
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị mma ka ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Usoro a anaghị adaba maka ndị ọrụ a na-enyefe ka ha rụnye mgbakọ ọkwọ ụgbọala karịa nke ahụ dị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Karịsịa maka ha enwere nhọrọ dị iche.
Usoro na saịtị ahụ ka na-achọ nkedo "Njedebe", ma tinye naanị otu iwu n'ebe ahụ. Usoro ahụ dum dị nnọọ mfe ma mee ya na ntinye ole na ole.
Gaa na NVIDIA website ebe ị mere mkpebi nke ọkwọ ụgbọala kacha ọhụrụ ma budata ya na kọmputa gị site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Download ugbu a".
Mgbe ihe nchọgharị ahụ pụta, họrọ "Save File".
Gbaa faịlụ nwụnye sitesh ~ / Downloads / NVIDIA-Linux-x86_64-410.93.runebe Nbudata - nchekwa iji chekwaa faịlụ, na NVIDIA-Linux-x86_64-410.93.run - aha ya. Ọ bụrụ na njehie emee, gbakwunye arụmụka na mmalite nke iwu ahụsudo.
Chere maka mmechi ahụ iji wuchaa.
Window ga-apụta ebe ịkwesiri ịgbaso ntụziaka ma họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị.
Mgbe usoro ahụ zuru ezu, malitegharịa kọmputa maka mgbanwe ndị ị ga-eme.
Lelee ọrụ nkịtị nke ndị ọkwọ ụgbọala ahụ awụnyere site na iwu ahụsudo lspci -vnn | grep -i VGA-18ebe n'etiti usoro niile achọrọ ịchọta "Ọkwọ ụgbọ ala eji: NVIDIA". Nkwado maka ngwangwa ngwaike na-enyochaglxinfo | grep OpenGL | grep renderer.
E nwere ụzọ dị iche iche iji wụnye software maka NVIDIA eserese eserese, naanị ị chọrọ ịhọrọ ọrụ kacha mma ma rụọ ọrụ maka nkesa gị. Ọzọkwa, ihe ngwọta maka njehie ndị mepụtara bụ ihe kacha mma iji zoo aka na akwụkwọ ndekọ nke os, ebe ntụziaka dị mkpa ga-edepụtara.